January 1, 2022 - Achawlaymyar
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ရသည့္ သမိုင္းေၾကာင္း
January 1, 2022 by Achawlaymyar
လွန်ခဲ့တဲ့ရက် အနည်းငယ်ကဒီဗွီဘီသတင်းမှာလာသွားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ပြန်လည်ပြုဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်း ကြည့်လိုက်ရတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အတော်များများ စီးခွင့်ရှိပြီ ရန်ကုန်မှာ စီးခွင့်မရှိလို့ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဆီမှာတောင်းဆိုမယ်လို့သိရပါတယ် ရန်ကုန်မှာဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ပိတ်လိုက်တာ ဘာအကြောင်း ကြောင့် ပိတ်တယ်ဆိုတာ တရားဝင်ကြော်ငြာခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူး.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သိထားတာတော့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ငယ်စဉ် ကတော့ motor cycle crazy တစ်ယောက်ပါပဲ 1984/85 လောက်မှာ ၆ မိုင်ခွဲ မြေနီကုန်း သမိုင်း တို့ကဆိုင်၊ကယ်သူရဲ တွေဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါလည်းဟုတ် ဆရာလည်း ဟုတ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ကအားလုံးထဲမှာ အသကျအငယ်ဆုံးပါသူတို့ကကျွန်တော့်ထက် ၄ နှစ် ၅ နှစ်ကြီးကြ ပါတယ် ကျွ န် တော်က ၁၇/၁၈ အရွယ်ပေါ့ ၆ မိုင်ခွဲက ဘော်ဒါ က၊လူကလည်းသန်တော့ Kawasaki-750 (အင်ဂျင်ပါဝါ ၇ … Read more
နှစ်သစ်ကူးချိန် သန်းခေါင်ယံမှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး အရိပ်ထွက်နေတဲ့ ထူးခြားနိမိတ်( နိမိတ်ဆိုတာ မယုံလို့မရဘူး…. ) ၁၂ နာရီအတိမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို ကျမတို့တိုက် Rooftop ကနေ အမှတ်မထင်ရိုက်မိလိုက်တာပါ။ အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာမှ Photo ပြန်ကြည့်ပြီး ဘုရားအရိပ်ထပ်ပေါ်နေမှန်း သိတာပါ။ အပေါ်ထပ်ပြန်တက်ကြည့်တော့ မတွေ့တော့ပါဘူးရှင်။ နှစ်သစ်မှာ ရလိုက်တဲ့ ပထမဦးဆုံး Photo လေးပါ။ ဘယ်လို ယူဆရမယ်တော့မသိပေမဲ့ ၂၀၂၂ မှာ အားလုံးဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်ပါစေ။ Editing လုပ်ထားတဲ့ Photo လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်း ကျမ ကိုယ်တိုင်အာမခံပါတယ်။ crd-Htike Htike Aung ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ သန္းေခါင္ယံမွာ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီး အရိပ္ထြက္ေနတဲ့ ထူးျခားနိမိတ္( နိမိတ္ဆိုတာ မယုံလို႔မရဘူး…. ) ၁၂ နာရီအတိမွာ … Read more
ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်း ငွေထုတ် ငွေသွင်းခြင်းများ အကြောင်း ဥပမာ သိန်းတစ်ထောင်ထည့်ရင်ဆိုပါစို့၊ အကောင့်ထဲ အကုန်ထုတ်မရပါ။ တစ်သိန်းကျပ်တိတိ စာအုပ်ထဲချန်ထားရပါ့မယ်။ လိုသလို ထုတ်ရဖို့ ထုတ်မရဖို့က ဘဏ်တစ်ဘဏ်နှင့်ဘဏ်တစ်ဘဏ်မတူသလို မြို့တစ်မြို့မှာ ဘဏ်ခွဲတစ်ခွဲတည်းရှိရင် သိပ်ပြီးအဆင်မပြေပါ။ တစ်ရက်တည်း သိန်း ရာဂဏန်းအထက် ထုတ်လိုလျှင် ဘဏ်ကိုတစ်ရက်ကြိုတင်ပြီး နောက်နေ့ကိုယ်ထုတ်မယ့်အကြောင့် နာမည်ပြောထားရမည် booking သဘောပါ။ ကိုယ်အရင်ကဖွင့်ထားသော ဘဏ်စာအုပ်အ ဟေ ာင်းထဲကနေလဲ စပါယ်ရှယ် အကောင့်ထဲ လွှဲလို့မရပါ။ တစ်ခြားတယောက်ယောက်က ကိုယ့်ဆီလွဲပေးချိန် Special အကောက့်နံပတ်လွဲခိုင်းရင်တော့ လွဲတဲ့ amount တိုင်းထုတ်ရပါတယ် ဒါဟာလဲ ကိုယ်ထုတ်မဲ့ဘဏ်မှာ ငွေရှိထားမရှိထားကမသေချာပါ။တစ် ခါတလေ လွဲပေးသူက လွဲပေးချိန်တုန်းက no6 bank မှာ ငွေ သားရှိတယ်ပြောပြီး ကိုယ်သွားထုတ်ချိန်မှာ မရှိဘူးဆိုပြီး အကုန်ထုတ်မရတတ်တာလဲ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ … Read more
တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၂၂ခုနစ္ တႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း…
တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၂၂ခုနစ္ တႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း ဤႏွစ္ (14.4.2022)မွ စ၍ မိမိလုပ္ကိုင္ခ်င္ေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။ တပည့္ေက်းကြၽန္မ်ား တလြဲတေခ်ာ္ ျပဳလုပ္တတ္သည္။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္တတ္သည္။ ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြမ်ိဴးသားခ်င္းႏွင့္ မိတ္သဂ္ဟမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ခံစားရမည္။ ပ်ိဴ႐ြယ္သူမ်ား ဖူးစာရွင္အသစ္ႏွင့္ ေတြ႕ၿပိး ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းမ်ား ရွိမည္။ သို႔ေသာ္ အေလာတႀကီး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား မေကာင္းပါ။ ပ်ိဴ႐ြယ္သူမ်ား ေဝးကြာေနသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံစည္းရကိန္း ရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား သားသမီးမ်ား၏ သတင္းထူးမ်ား ၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ အစား၊ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာ၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္းေရာဂါမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ အထူးေဟာ… စိတ္ေလာႀကီးၿပိး တစ္ပါးသူ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ေရွာင့္သင့္၏။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဂ္ါႏွင့္ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားျဖင့္ … Read more
လူမႈကြန္ယက္ ေပၚတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေနေသာ ဗီဒီယို
ယ​ေန႔ လူမႈကြန္ယက္ ​ေပၚတြင္ လူႀကိဳက္မ်ား​ေန​ေသာ ဗီဒီယို ျမင္ကြင္း တစ္ခု။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြား​ေရး အနိမ့္ဆုံး မိသားစုမွ ခ​ေလးငယ္​ေလး တစ္ဦး က ​ေတာ္လွန္​ေရး သီခ်င္း ​”ေသြးသစၥာ” ကို သီဆိုၿပီး အလႉခံ​ေန​ေသာ ျမင္ကြင္း ျဖစ္သည္။ ၾကည့္ရႈၿပီး ႏွစ္သက္စြာ ျပန္လည္မွ်​ေဝခဲ့သူ တစ္ခ်ိဳ႕က​ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ကို ခ​ေလးငယ္​ေလး တစ္ဦးက​ေတာင္ မ​ေၾကာက္မ႐ြံ႕ ဂ႐ုမစိုက္ပဲ ​ေတာ္လွန္​ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္​ေပးခဲ့ၾက​ေလသည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္​ေန႔။ ယနေ့ လူမှုကွန်ယက် ပေါ်တွင် လူကြိုက်များနေသော ဗီဒီယို မြင်ကွင်း တစ်ခု။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အနိမ့်ဆုံး မိသားစုမှ ခလေးငယ်လေး တစ်ဦး က တော်လှန်ရေး သီချင်း … Read more
မနေ့က ကျမဆေးခန်းကို ultrasound ကြည့်ဖို့ သားအမိနှစ်ယောက် လာပါတယ် သူတို့သားအမိ ဝင်လာတုန်းကတော့ ရင်သားတဖက်မရှိတဲ့ မိခင်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်း လူနာလို့ထင်မိတာပါ။ နောက်တော့မှ ကျမသမီးလေး ရာသီမလာတာ3လလောက်ရှိပြီ ဗိုက်မှာလည်း အလုံးပေါ်နေလို့ဆိုမှ ကလေးဗိုက်ကို စပ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဗိုက်ထဲမှာကိုယ်ဝန်က5လပြည့်ခါနီးပါပြီ။ ကလေးရဲ့အသက်ကို သေချာသိချင်လို့ မွေးနေ့မေးလိုက်မှ 13နှစ်နဲ့ တစ်လဗိုက်ထဲက ကိုယ်ဝန်က 5လ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အမွှေးတောင် သေချာမပေါက်သေးတဲ့ မျက်နှာအေးအေးလေးနဲ့ ကလေးကိုကြည့်ပြီး ကျမဘယ်ကနေ စပြောရမလည်းတောင် တွေးမရတော့ပါ မတတ်နိုင် အမေကိုရှင်းပြတော့ပြီး သမီးရည်းစားရှိသလား ချော့မေးတော့ ရည်းစားတော့မရှိ အပျိုမဟုတ်တဲ့ အဆောင်နေသူငယ်ချင်းဆီက ဘောင်းဘီယူဝတ်မိသည် ဟုပြောသည်။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး အမှန်အတိုင်းပြောဖို့ နည်းနည်းလေးမာန်လိုက်တော့မှ တတန်းထဲနေ သူငယ်ချင်းနှင့်ဟု ဝန်ခံလာလေသည်။ fb ပေါ်မှာ … Read more
၈၈ အရေးအခင်း နှစ်ပေါင်း ၃၃နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ သူလေးစားရတဲ့သူတွေကို ချပြခဲ့တဲ့ မင်းမော်ကွန်း
ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းမော်ကွန်းကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာရော နှင်းဆီအငြိမ့်မှာရော အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းက အနုပညာမှာလည်း (UniCode ျဖင့္ ဖတ္မရသူမ်ားအတြက္ ေအာက္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီကုဒ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္) ကျရာဇာတ်ရုပ်ကနေ သရုပ်ဆောင်နိုင်သလို အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်း နာမည်ပျက်မရှိအောင် နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကမှာလည်း ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဇင်ဝိုင်းကိုလည်း လူတိုင်းက လေးစားအားကျရသလို သားဖြစ်သူ မင်းမော်ကွန်းကလည်း အမှန်တရားဘက်ကို ရဲရဲဝင့်ဝင့်နေရဲသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်.။ ပြည်သူတွေရဲ့အတူ ခံစားချက်တွေထပ်တူကျခဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင် ဖခင်ဖြစ်သူ အဖ.မ်းခံရတဲ့အခါမှာလည်း နောက်ဆုတ်မသွားတဲ့အပြင် ရှေ့ကိုသာ ဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ အဖေဖြစ်သူရော သားဖြစ်သူပါ ရဲရင့်ပြတ်သားစွာ ရှိနေခဲ့ကြလို့လည်း ပြည်သူတွေလည်း အားအင်တွေအပြည့်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော် မင်းသားမင်းမော်ကွန်းကတော့ လူကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး လူများနည်းတူ လူမှု့ကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်ကနေလည်း ဆက်လက်ပြီးတော်လှ.န်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခံဝန်ကတိထိုးဖို့ တွန်းအားပေးခံခဲ့ရပေမယ့် နောက်မဆုတ်ဘဲ … Read more
မြန်မာပြည်ကို အအေးလှိုင်း ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဂျင်းသတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာမလေး စုစုစံ ပြောပြီ
မြန်မာပြည်ကို အအေးလှိုင်း ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဂျင်းသတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာမလေး စုစုစံ ပြောပြီ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အအေးလှိုင်းဖြတ်မည်ဟုဆိုတာ မဟုတ်ဘဲ လာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလအထိ အအေးလှိုင်း (cold wave) မရှိဘဲ ပုံမှန်ရာသီဥတုမျိုးသာ ရှိမယ်လို့ မိုးလေဝသပညာရှင်မလေး စုစုစံက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၂ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုံမှန်ရာသီဥတုကိုသာရရှိနိုင်ပါတယ်။ အအေးလှိုင်း (cold wave) မရှိပါဘူး။ ၂၀၂၂ New year နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ ပုံမှန်ဆောင်းထက် အနည်းငယ်သာ ပိုအေးစေနိုင်ပြီး ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ပုံမှန်ဆောင်းကိုသာရရှိစေပါလိမ့်မယ်”လို့ မိုးလေဝသပညာရှင်မလေး စုစုစံက ပြောထားပါတယ်။ အအေးလှိုင်း (cold wave) ဆိုသည်မှာ နာရီပိုင်းအတွင်း နှင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနှင့် ဆီးနှင်းများကြွေကျပြီး အပူချိန် ရုတ်တရက် ရ … Read more
ပရိသတ် ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မိုးအော င်ရင်ကတော့ လက်ရှိမှာ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုေ တွ မရှိေ သးတာကြောင့် Gym နေ့တိုင်း ဆော့ကစား လျက် ရှိနေ ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ကိုလည်း ဆိုရှယ် မီဒီယာများမှ တစ်ဆင့် တင်ပေးေ နတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခွီဟာသဗီဒီယိုတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးတတ်လာပါတယ်။ မကြာသေး ခင်က မိုးအောင်ရင်ရဲ့ Tik tok အကောင့်တွင် ဗီဒီယိုလေး တစ်ခု တင်ထား တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့ အတိုင်း အရက်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားေ နပေမယ့် အဆင်မပြေဖြ စ်ခဲ့ပုံကို ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့် တကွ ပြသလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးအောင်ရင်ကတော့ အရက်တွေကို ကတ်ကြေးဖြင့် … Read more
Unicode ကားအသစ် ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ ရာထူးတိုးတော့မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ ( ကောင်းလွန်းလို့ဖတ်ကြည့်ပါ ) အိမ်ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။ ကားအသစ် ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။ အိမ်ထောင်ပြုတော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။ အပန်းဖြေခရီးထွက်တော့ မှာလား၊ တိတ်တိတ်နေပါ။ ကျောင်းတက်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။ ရာထူးတိုးတော့ မှာလားတိတ်တိတ်နေပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အကောင်အထည် ပေါ်လုပေါ်ခင် အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်အကျိုး မလိုလားတဲ့ မိတ်ဆွေတုတွေကို သွားပြောမိတဲ့အတွက် မျှော်လင့်ထားတာတွေ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ ‘မိတ်ဆွေပါ’ ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ထက်သာ မနာလိုသူတွေရဲ့ ကွက်ကျော်ရိုက်မှု၊ ကုလားဖန်ထိုးမှုကြောင့် ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေကို လက်တစ်ကမ်း အလိုလောက်မှာ လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် …. ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည်သာ … Read more